Ingelosi Inombolo 999 Intsingiselo - Amanani Aphindayo
Ngaba ingelosi inombolo 999 ibikulandela ngokungummangaliso kangangeentsuku okanye iiveki ngoku? Ukuba ubukhe wabona eli nani likathathu ngendlela eyekile ukuziva ngathi yinto eyenzekileyo, inokuba luphawu olubalulekileyo oluvela kwindalo iphela.
Ingelosi inombolo 999 ineentsingiselo ezinamandla. Kule nqaku, ndiza kuphanda ezinye zeenguqulelo ezithandwa kakhulu kwaye ndikuncede ufumane ukuba kutheni le nombolo ibonisa ngokuphindaphindiweyo ebomini bakho.
Iziqalo ezitsha zi-Afoot
Izicwangciso ezingcono ziyenziwa
Ukuxolelwa ngenxa yekamva lakho
Thetha Inyaniso Yakho
Ithetha ukuthini i-999 ngokweBhayibhile?
Ithetha ntoni i-999 eluthandweni?
Ithetha ntoni i-999 kumaTwin Flames?
Kutheni i-999 linani likaThixo?
Iingxaki ezingama-99 kunye nezisombululo ezingama-999
Ezinye zeentsingiselo ezibaluleke kakhulu zengelosi inombolo 999 zezi:
Iziqalo ezintsha ziyaqhubeka.
Izicwangciso ezingcono ziyenziwa.
Uxolelo ngenxa yekamva lakho.
Thetha inyani yakho.
Nangona kunjalo, inokuba nentsingiselo eyahlukileyo kuwe. Ukufumanisa ukuba i-999 luphawu lokuba iziphiwo zakho zokomoya kunye neetalente zikaThixo ziyavuka, cinga ngokufunda ngokwakho amanani. Isebenzisa igama lakho kunye nomhla wokuzalwa ukumisela isicwangciso somphefumlo wakho. kwaye ufumane ukuba zeziphi izipho ezingama-999 ezifuna uphuhlise.
Kukho unxibelelwano olunamandla phakathi kwamanani engelosi u-999 kunye nomxholo we iziphelo kwaye iziqalo . Yonke into kwindalo iphela ijikeleze, kwaye ukubonwa okuqhubekayo kwala manani kuthetha ukuba usekupheleni kwesinye umjikelo kwaye kwi-cusp yokuqalisa entsha.
Kukho iindlela ezintlanu zokutolika kule ntsingiselo ithandwayo yengelosi inombolo 999:
Kukho unxibelelwano phakathi kweyona ntsingiselo idumileyo yengelosi inombolo 999 kunye Ubume bokujikeleza kobomi . Xa uqala ukuwabona la manani ngokungaguqukiyo, oko kuthetha ukuba inkalo enye yobomi bakho sele iza kufikelela kwisiphelo esifanelekileyo, kwaye enye indlela sele iza kuvela phambi kwakho.
Ukubona inani leengelosi ezingama-999 luphawu olomeleleyo lokuba ikamva ndikujongile ngelixesha le utshintsho, kunye nemikhosi yezendalo izama ukukuhambisa kwicala elifanelekileyo.
Ukufunda malunga nokunxibelelana nale mikhosi ye-cosmic, rhuma kule ncwadana . Uya kufumana izixhobo kunye nobuchule bokusebenzisa ubuqhetseba ukwenza ukutsiba ukusuka emzimbeni ukuya kumangalisa ukuze bakwazi ukunxibelelana nemikhosi engaphaya kokuqonda kwethu.
Eli lelona nqanaba ebomini bakho apho kufuneka uthembe ukuba indalo iphela inomdla kuwe, kwaye nokuba awuziqondi izizathu zenguqu ezizayo, kufuneka uthembele kwicala langoku lobomi bakho.
Ukufumanisa ukuba kungathini na ukuqalwa okutsha, funda ukubalwa kwamanani akho. Isebenzisa igama lakho umhla wokuzalwa ukubala iinombolo zakho kunye neentsingiselo ngokwamanani. Iya kukuxelela ngeziphiwo zakho zokomoya, iitalente kunye namandla, eya kuthi ikuncede uyazi ukuba leliphi icala lobomi eliza kukusa kulandelayo.
ukuhambelana kwegemini kunye neepisces
Ithuku lakho liya kukukhokela ngeli xesha, kwaye ukuba uluhlobo lomntu ongazange unikele ngqalelo kwimvakalelo yakho, eli lixesha elifanelekileyo lokuba uqale. Wonke umntu une ukukhanya okukhokelayo kwangaphakathi kunye nelizwi elibanceda bafumane indlela ebomini.
Abanye banelizwi eliqinileyo nelithile, ngelixa abanye benelodwa elivelayo kuphela xa kufuneka njalo. Kungakhathaliseki ukuba kunjalo, ilizwi likhona, kwaye liyakunceda ufumane indlela yakho efanelekileyo ngexesha lolu tshintsho.
Ukucwangcisa kuyanceda ukukhonza eyona nto uyithandayo ngexesha lolu tshintsho. Eli lixesha lokuba uphinde uphonononge izinto eziphambili ngokubaluleka, injongo kunye neenjongo zobomi. Kuya kufuneka ujonge kubo bonke abantu onxibelelana nabo rhoqo kwaye ufumanise ukuba bangena njani kwisigaba esilandelayo.
Ukuba neyakho iinjongo Imephu ebhalwe entlokweni yakho iya kukuvumela ukuba ubone ilungelo amathuba Ngexesha elifanelekileyo, ngaloo ndlela ndikuncede ulusebenzise ngokupheleleyo olu tshintsho lubalulekileyo oluzayo oluxelwe kwangaphambili yi-999.
Kulixesha elihle lokuqonda ukuba yeyiphi inkalo yobomi bakho eza kufikelela esiphelweni kwaye uyayiqonda indima oyidlalileyo ekucoceni indlela kwinqanaba lakho elitsha. Ukucinga kwangaphambili kuhlala kunomvuzo, kodwa ngamanye amaxesha kubalulekile ukujonga emva kwaye ubekhona Enkosi eyabantu kunye neziganeko ezibumbe ubomi bakho.
Nika ingqalelo kwiingcango ezivaliweyo emva kwakho ukuze ubone ifestile eza kuvuleka ibanzi.
Ukufunda ngakumbi ngendlela yokusebenzisa izinto zokomoya ukuze uphile ubomi obukhuthazwe ngumphefumlo, rhuma kwincwadana yam. Uya kufumana ukuqonda okuvela kumathala eencwadi ezintsonkothileyo eziza kukunceda ufumane indawo yakho yokwenene yamandla phakathi kokutyhilwa kwengoma yoThixo.
Nangona nje tshintsha kuphela rhoqo ebomini, abanye bethu abazimisele ukwamkela utshintsho oluzayo ngendlela yethu. Ukuba uhlala ubona ingelosi inombolo 999, luphawu lokuba akufuneki uxhathise utshintsho oluzayo kwaye unikezele kwintando yendalo iphela.
Isicwangciso esingcono iyenziwa ngaphandle kokuba uyiqonde, kwaye kufuneka udlale indima yakho nokuba iziqwenga zephazili azikalingani ngoku.
Oku kuyinyani ngokukodwa ukuba uhamba kwisigaba esinzima ebomini bakho. Inokuba bubudlelwane obunzima, umsebenzi ongonelisiyo okanye nayiphi na enye ingxabano phakathi kwabantu eshiya incasa ekrakra emlonyeni wakho.
Kuya kufuneka uqaphele ukuba oku isigaba esinzima uza ku dlula kungekudala. Ungayikhawulezisa le nkqubo ngokunikezela kwimikhosi yehlabathi. Kubalulekile ukuqaphela ukuba asikwazi ukulawula zonke iinkalo zobomi bethu kwaye zikhona imikhosi emikhulu ekudlaleni ngakuye.
Ukuziqonda ezi imikhosi kunye nokuqonda kwabo ukulunga okwendalo izakuvumela ukuba ukhawulezise utshintsho olulindelekileyo ebomini bakho.
Ukuyeka ngamanye amaxesha kunamandla ngakumbi kwaye zintle kunokuba ubambe. Unokuthi, ngokuqinisekileyo, ubambe kwinxalenye enye yobomi bakho kuba sele utyale ixesha elininzi kuyo. Oku kuyinyani ngakumbi kubantu ngokubhekisele kwimisebenzi kunye nobudlelwane kwaye yenye yemiyalezo ebaluleke kakhulu kwinani leengelosi ezingama-999.
Ukuyeka izinto ezisizisa phantsi kwaye zivulekele ukuthanda kwendalo yonke ukukhokela indlela yethu yexesha elizayo kunokuba yenye yezona Ukuqinisekisa kwakhona iimvakalelo!
Yazi nje ukuba uhamba into enzima ngoku, oku kuyakudlula. Indalo iphela ijonge kuwe, kwaye yenza isicwangciso esifanelekileyo esiza kulunga ngqo kwiinjongo zakho. Thembela nje… uyeke!
Esinye sezigqibo ezibaluleke kakhulu zokuququzelela utshintsho kukuzibandakanya uxolelo . Le yenye yeentsingiselo ezibaluleke kakhulu kungelosi inombolo 999.
Uxolelo luhambelana ngqo nombono wokuyeka ukuhamba, ngaphandle kokuyeka iinkumbulo ezimbi okanye iimvakalelo ezikwenzakalisa.
Kungadimaza xa izinto zingahambi ngendlela yakho okanye ngezenzo zabantu abakungqongileyo, kodwa ukubona ingelosi inombolo 999 luphawu lokuba ukuthwala le mithwalo kukukhathaza ngakumbi kunokuba usazi. Kungumqondiso wokuba kufuneka uyeke nantoni na eyonakalisayo kwixesha lakho elidlulileyo ukuze uqale inkqubo yokuphilisa.
Ukulibala ngokulula ezi nkumbulo okanye izehlo aziyi kwenza, nazo. Konke malunga nokuxolelwa, njengoko kungekho nto iphilisa ngokufana nale ndlela inamandla. Awunakho nje ukubrutha ecaleni kwentlungu yakho okanye ungayityhaleli ngaphakathi ezingqondweni zakho. Iyakwenza iimvakalelo ezimbi , kodwa ayizukuzicima kwi-subconscious yakho.
Uxolelo lunokuba ngu ukuvuselela imvakalelo njengoko ikwenza ukhululeke ngakumbi neemeko zakho. Ikuvumela ukuba uxabise kwanexesha elibi elidlulileyo. Umqondiso we-999 ufuna ukuba uyamkele le nto ibalulekileyo.
Ungu incopho yazo zonke iimeko yobomi bakho-kokubili okuhle nokubi-kwaye ngokude uxolile apho ukhoyo, zonke iinkumbulo ezimbi kufuneka zibe nentsingiselo njengezona zilungileyo kuba zikwenze wangoku.
Intsingiselo yengelosi inombolo 999 apha kukuba ikucela xolela i iinkumbulo ezimbi yexesha lakho elidlulileyo ngenxa yakho, ngenxa yokukhula nokuzaliseka kobuqu. Ukwamkela iinkumbulo ezimbi kunye nokuzamkela kuya kukusondeza kwinyani yakho kwaye kukukhulule kwi umjikelo okhohlakeleyo ye inzondo .
Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngokuzikhulula kwimijikelezo yenzondo, rhuma kwincwadana . Uya kufumana izithethe zokungakhathali ezivela kumathala eencwadi e-mystics, oomlingo kunye nama-maverick.
Ukubona ingelosi engu-999 ngokuphindaphindiweyo kunokuthetha ukuba indalo iyakufuna ziveze ngokunyanisekileyo kwaye uthethe ingqondo yakho rhoqo.
Asinguye wonke umntu okhululekile ukuzityhila ngokunyanisekileyo kwaye avumele iimvakalelo zabo ezinzulu zibaleke simahla, kodwa eli nyathelo libaluleke kakhulu emphefumlweni wakho. Ingelosi inombolo 999 luphawu ekufuneka ulwenzile zibandakanye ngolwimi lomphefumlo wakho kwaye uzibonakalise ngendlela ongakhange ube nayo kwixesha elidlulileyo.
Ukuchitha ixesha ngokwakho yindlela elungileyo yokumamela kwiingcinga zakho ngokucacileyo kwaye unxibelelane nelizwi elisentloko yakho.
Uninzi lwabantu alunalo ixesha loku kwaye baxakekile bebaleka kwimowudi yokuqhuba ngokuzenzekelayo ukuze baphile. Kodwa ukuba unethamsanqa elaneleyo lokuba ube nexesha kunye nendawo yokuchitha ixesha elisemgangathweni kunye nawe, ndicebisa ukuba uthathe ixesha lokwenza njalo.
Oku kuyakuvumela ukuba uziqonde kwinqanaba elinzulu, eliya kuthi, likuvumele ukuba uziveze ngakumbi.
Ukongeza, ukuthetha ngokwakho akuthethi ukuba usebenzisa amagama akho xa uqala ukubona ingelosi engu-999. Ikwanokuthetha ukuba kuya kufuneka uziveze ngobuchule ngohlobo oluthile, nokuba yingoma, ukupeyinta, izixhobo zomculo okanye nayiphi na enye into iindlela zokuyila .
Ukubona i-999 luphawu lokuba uyayisebenzisa ubuchule bobugcisa Kwaye kufuneka ugxile kumandla akho okudala ukuze wenze uninzi lweetalente zakho ezifihliweyo. Kunokumangalisa ukuva oku, kodwa kunokuza njengothusayo omkhulu xa ufika ubuso ngobuso kunye netalente yoyilo elindele ukuqhuma.
Ukuba uziva ungaqinisekanga kwaye ungaqinisekanga malunga nokuthetha inyani yakho, cinga ngokufunda amanani. Iya kukunika ukucaca malunga noko umntu wakho ophakamileyo afuna ukuba ukwazi, ukukunceda ukuba ungene kubomi obuyinyani.
Inombolo yeengelosi ezingama-999 inokukuxelela ukuba kufuneka uyeke ujonge ngaphakathi ngeli xesha lobomi bakho. Endaweni yokuba lixesha lokuba negalelo kwihlabathi liphela. Inokuba luphawu lokuba kuninzi onokunika lona kwihlabathi, kwaye izenzo zakho zinokuba nefuthe elibi kwabanye ukuba utshintsha indlela.
Ukukhonza i unobangela omkhulu ayisiyondlela inzima njengoko zininzi izizathu ezifanelekileyo phaya. Izigidi zabantu nezilwanyana zifuna uncedo, kwaye ukuba ukwimeko apho wanelisekile kwaye ukhululekile kodwa usabona ingelosi yenombolo 999, lixesha lokuba ucinge ngabanye.
Imigaqo ye ikarma zinxibelelene ngokunzulu nokubhula ngamanani, kwaye ukuba indalo iyakucela ukuba wenze njalo nika ubuyele ebantwini, oko kunokuthetha ukuba uye ithathiwe ngokwaneleyo kweli nqanaba. Ikwanokuthetha ukuba eli lixesha elihle lokuba uphucule ibhalansi ye-karmic kwaye uyivumele ukuba iphumle kwicala elilungileyo lesikali notshintsho.
Lilonke, unokuninzi onokukufumana ngokunika. Uhambo oluphambili lusenokuziva ludimaza okanye lusoyikisa, kodwa yindlela ezukileyo leyo bambalwa abaya kuzimisela kuyo. Qiniseka nje ukuba ubala iintsikelelo zakho kwaye ucinezele umphunga opheleleyo ngaphambili!
Ngokwentsingiselo yebhayibhile, ingelosi engu-999 inxulumene nabantu abanesiphelo esichaphazelekayo Ukunceda abanye kunye nokwenza umhlaba ube yindawo engcono. I-999 linani eliqhele ukunxulunyaniswa nesiko losindiso.
Xa kuziwa kuthando, ingelosi inombolo 999 imele ukugqitywa . Le yintsingiselo yesiko lenombolo engu-999, kwaye iyinyani nakwezothando. Kungathetha ukuba nokuba luphi na uhambo sele luphelile okanye olunye luza kuqala.
Ngokuphathelele amalangatye amawele, ingelosi inombolo 999 iya kukunceda ufumane idangatye lakho lula ngakumbi . Kukucela ukuba uqaphele ukuba ilangatye lakho lamawele lisondele kwaye kufuneka umazi loo mntu ngokukhawuleza xa uwabona.
Inombolo 999 inxulumene inombolo kaThixo kuba, ngokweenkolelo ezithile zobuKristu, imele ukugqibelela okuphindwe kathathu kobathathu emnye. Eli nani limi ngokwahlukileyo kwinani lama-666, elimele inani lerhamncwa.
Yonke into enesiqalo kufuneka ifike esiphelweni. Le yi umthetho wendalo , nkqu neenkwenkwezi neminyele ayikhululwanga. Ukuqonda kunye nokuqonda ezi ndawo zingcwele kusivumela ukuba sijonge ubomi bethu ngendlela eyahlukileyo.
Ingelosi inombolo 999 ilapha ukukukhokela kule nto ibalulekileyo utshintsho kwaye kukwazise ukuba ukhathalelwe ngexesha elinokubonakala ngathi linamaxesha esiphithiphithi. Yithembe indalo iphela kunye nezi mpawu zixabisekileyo, kwaye isisombululo siyakuziveza, kufana nokubonisa uphawu lwe-999 kwasekuqaleni.
Kutheni le nto Ukophula isipili kusithuka ngeminyaka esi-7 ngethamsanqa elibi?
Kuthetha ukuthini ukuba i-mercury ibe kwi-retrograde
ukubhula ngenani 6 indlela yobomi
4:44 ukubhula ngamanani
intsingiselo yokomoya yama-77